Ukuphupha ngePhobia Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-phobia ibonakaliswa luloyiko olugqithisileyo lwento ethile, imeko, okanye umsebenzi. I-Phobias luloyiko olungenangqondo olunqanda kakhulu kwaye luphazamise indlela yokuziphatha eqhelekileyo yomntu kuthethwa ngaye. Bamele ukuphazamiseka kwengqondo ngokwamkelwa nokwamkelwa njengenxalenye yobomi ngabantu abaninzi abachaphazelekayo. Ezinye i-phobias zinokuba zikhethekileyo kangangokuba zinokuthintela kakhulu ebomini.
Nangona kunjalo, uphawu lwe-phobia ayisiyiyo into ethile okanye umsitho, kodwa sisiphumo sokuba woyike ngokwakho ukunxibelelana nayo. Ke ayisiyonyusi okanye ilifti ngokwayo eyoyikisayo, kodwa umbono wokuba ungafuthanisela xa ubambekile. Okanye uyoyika inqaba phezulu kuba woyika ukuwa kukoyilo phezulu.
Ngokwembono yengqondo, umntu uyazi kakuhle ukuba uloyiko alunasihlahla, kodwa akakwazi ukumelana nemeko ebangela uloyiko. Umntu uya kuthintela kwaye ngenxa yoko uqinisa i-phobia yakhe ngalo lonke ixesha, kuba ngekhe afumane ukuba naluphi na uloyiko lwakhe luzaliseka ngokwenyani.
Ngaba iphupha lokoyika lihlala lithetha ukuba umntu unesifo sokwesaba? Kule tekisi ilandelayo uya kufumanisa ukuba lithetha ntoni kanye kanye iphobia kuhlalutyo lwamaphupha:
1 Uphawu lwephupha «phobia» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «phobia» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «phobia» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «phobia» - ukutolikwa ngokubanzi
Iphupha apho umntu wayejamelene ne-phobia unokuziva ungonwabanga kwaye usongela iphupha kwasekuqaleni.
Ngokwenkcazo yamaphupha, xa i-phobia ibonakala emaphupheni ethu ihlala ikwabonakaliswa uloyiko lokwenene okanye eneneni kukho phobias zokulala. Ke ngoko, i-phobia inokuchaphazela amaphupha ethu.
Ukuba ufumana imeko kwi el mundo kufana nephupha apho usabela khona xa usoyika kwaye usoyika, nokuba oku kubomi bokwenyani Hayi ewe, umntu kufuneka aqwalasele umxholo wephupha. Ukuba woyika ngequbuliso ngokukhwela isinyuko okanye isakhiwo esiphakamileyo kwimeko yamaphupha, uloyiko lokungazi nto ngemiceli mngeni yangoku ebomini bomntu ophuphayo inokuba semva kwayo.
Ngaba kukho izinto, izinto, okanye iimeko ezibangela imvakalelo yephobia yephupha? Ke kuya kufuneka ukuba uvumele ezi ntsingiselo ukuba zihambe kutoliko lwephupha, kuba zizisa ukuqonda okubalulekileyo kuhlalutyo kwaye ke kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Uphawu lwephupha «phobia» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba ubona i-phobia yakho njengovakalelo ngokwasemzimbeni emaphupheni, kuya kufuneka ukhumbule ukuba i-phobia iqala ngaphezulu kwako konke ngenkxalabo malunga nengozi ekucingelwayo. Sijonga ukubanakho kwengozi kunye nobubanzi bengozi, kwaye kwangaxeshanye sibajongela phantsi amandla ethu okujongana nemeko emaxongo.
Iingcinga zethu zijikeleza kuphela kolo loyiko kwaye ziphele kumjikelo okhohlakeleyo. Iimvakalelo zethu zisabela kuloyiko, ukucaphuka, ukungazithembi, umzimba uphendula kwezi mvakalelo ngoxinzelelo, isicaphucaphu, isiyezi kunye nezinye iimpawu. Ke ukuba uyayiva le nto kumaphupha akho, ihlala isekwe kumava angalunganga.
Olunye uhlobo oluqhelekileyo lwephobia yile Ukoyika intlalo. Oku kunokuvela kumava ephupha xa umntu eziva engumkhenkce kwaye esoyika kwindawo ekufuphi nabanye abantu, esoyika ukujongwa kunye nokuvavanywa ngokungamkelwa. Ngokunokwenzeka, umphuphi ude aphulukane nolwimi lwakhe kwimeko enjalo okanye ashiye ukungcangcazela phambi komnyango wangaphambili ukuya ethekweni okanye kumsitho.
Nokuba oku akuhambelani neempawu zomntu ophuphayo ngokwenyani, ukoyikwa kwentlalontle komelele kakhulu. iintloni.
Iphupha lale phobia, ke, linokucelwa kuphela kwabo baphuphayo ukuba bangarhoxi kakhulu kubo kwaye bahlale benxibelelana nabanye abantu. Nangona kunjalo, ukuba awonwabanga kakhulu ngengcinga, kunokubakho okungaphezulu koku kunokuba ubucinga.
Uphawu lwephupha «phobia» - ukutolika kokomoya
Ngokomoya, umfanekiso wephupha "phobia" unokuqwalaselwa njenge Uloyiko kwi-subconscious kuqondwe, kuthatha imilo ngamaphupha ethu kwaye kukukhumbuza xa uphupha ukuba ukhathalele iimfuno zomphefumlo wakho.